Anagu waxaan idiinka faydaynaa cadaabka wax yar idinkuna waxaad ku noqonaysaan xumaanta.
Maalintaan qabanayno qabashada wayn (Qiyaamada) (ama Badar) waanu aarsan.
Dhab ahaanbaan Imtixaanay hortood qoomkii Fircoon, waxaana u yimid Rasuul sharaf leh.
Isagoo dhihi iidhiiba addoomada Eebe (ama maqalka) waxaan idiin ahay Rasuul aamin ah.
Ilaahay mooyee Eebe kalane ma jiro, isagaa wax nooleeya waxna dila, waana Eebihiina iyo Eebaha Aabbayaalkiinii horreeyey.
Waxayse ku suganyihiin shaki wayna ciyaari.
Oo dabooli Dadka kaasina waa cadaab daran.
Goormay waantoobi isagoos u yimid Rasuul cad «muuqda».
Waannu sheegnay iyadoo kale.
Waxaan ku dhaartay Kitaabka Cade (Quraanka).
Anagaa dejinay Quraanka Habeen barakeysan (Layletulqadar) anagaana wax u digi.
Habeenkaasaana la kala bixiyaa amar kastoo xigmo leh.
Waana amar agtanada ka ahaaday, anagaana wax dirra (Rasuulo).
Naxariis ka ahaater xagga Eebahaa, Eebaana wax maqle ah wax og.
Waana Eebaha samooyiinka iyo Dhulka iyo waxa u dhaxeeya haddaad yaqiinsanaysaan.